“Cashuurta Ka Soo Baxda Suuqa Waaheen, Madaarka Iyo Sayladda Xoolaha Midna Waxba Looguma Qabto Dadka Deegaanka…” Boqor Raabi – somalilandtoday.com
“Cashuurta Ka Soo Baxda Suuqa Waaheen, Madaarka Iyo Sayladda Xoolaha Midna Waxba Looguma Qabto Dadka Deegaanka…” Boqor Raabi
Madaxweyne Ku-xigeenka Oo Sagootiyey Kooxda Horyaalka Gobollada Somaliland Ee Maqalka Naafada Ka Ah Oo Tartan Caalami Ah Kaga Qayb-gelaysa Dalka Jabuuti
Somaliland Oo Saaka Dil Toogasho Ah Ku Fulisay Lix Qof Iyo Magacyadooda
“Dhakhtarku Xaal Ha Ka Bixiyo Hadalkaas, Waa Gef Iyo Meel Ka Dhac…” Cabdikariin Xinif Oo Naqdiyay Hadal Dhwaan Ka Soo Yeedhay Dr. Gaboose.
(SLT-Hargeysa)-Boqor Raabi Yuusuf Cabdilaahi oo ka mid ah Madax-dhaqameedka Magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in dhul boob culus lagu hayo Magaalada Hargeysa oo dad gaar ahi dhulkii danta guud qaadanayaan halka uu sidoo kale aad uga dayriyay xaaladda Sayladda Xoolaha Hargeysa iyo suuqa Sariibadda Oktoobar oo uu sheegay in sariibaddana dad gaar ahi qaateen sayladdii xoolahana dhaqaalihii ka soo baxayay dadka deegaankaasi ay ku taallo aan waxba looga soo celin.
Boqor Raabi Yuusuf Cabdilaahi oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Hargeysa ayaa sheegay in uu aad xun yahay in dadkii danyarta ahaa ee ka shaqayn jiray Madaarka Magaalada Hargeysa shaqadooda laga eryay isaga oo sheegay in lagu sheegay dadkaasi dad oromo ah halka uu ka hadlay dhulkii uu lahaa Dugsiga Hoose Dhexe ee Sheekh oo uu sheegay in dad gaar ahi qaateen.
Boqor Raabi Yuusuf Cabdilaahi oo arrimahaasi iyo kuwo kaleba ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Degmada Maxamuud Haybe waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu dakhliga badan. Xaafadda Maxamuud Haybe ama hore loo odhan jiray Guryosamo waxa ka soo baxa dakhli badan. Madaarka xaafadda ku yaallaa waxa uu soo saaraa sannadkii inta ay noo sheegeen oo kali ah weeyaane 20 Milyan oo Dollar. Inta la qariyay kuma xisaabtamayno. Agaasime kama shaqeeyo, ku xigeen kama shaqeeyo, qof muuqdaa kama shaqeeyo. Shaqaale hoosaadkii masaakiinta ahaa ee deegaanka ee dhulka laga qaadayna inta ay soo ururiyeen bay ku sheegeen oromo. Sayladda xoolaha hore ayaan idiinku sheegay in ay ka soo baxaan sannadki 30 Milyan oo Doollar. Mowsimka Xajkana waxaabay gaadhaa 60 Milyan oo Dollar. Suuqa weyn ee Waaheen lacagta waddankaba lagu wadaa isaga ayay ka soo baxdaa. Wax Allaale wax deegaankaasi kaga soo noqdaa ma jirto. Marar badan baan ku celcelinayaaye kii aan dhagahiisu maqalow maqal. Cashuuraha kale kuma jiraan sida cashuuraha qaadka sida Ina Afdiinle, Ina Soofe iyo ragga kale ee faraha badan ee dhaqaalaha badan soo saara ee wax lagu kala wadaa deegaankan ayay ka soo baxaan. Sariibaddii Oktoobar ee Xaafadda Oktoobar ee aad ogaydeen in danta guud lagu dhisay ee ay dawladdii Maxamed Siyaad Barre danta guud ku dhistay ee ay deganaayeen saddexda kun ee danyarta ahi ayaa waxa la sheegay in aayar la siiyay nin ka mid ah Heegada ama Jeegaantaba ka mid ah waa isku mide ayaa la siiyay oo inta uu albaab walba ka xidhay dadkiina soo daadiyay. Hay’adda la yidhaahdo UNHCR ayaa ka dhistay 72 guri markii dalka la soo galay. Indhahooda oo shan ah ayaa waxa laga gooyay 71 kii guri iyagana dibada loo daadiyay iyaga oo barokacayaal ah. Mana jiraan laba cali oo is waydiiyay. Masuuliyaddaa waxa qaadaya ciddii masuuliyadda haysay ee Xaafadda Axmed Dhagax iyo xaafadda Maxamuud Haybe. Kuwaasi ayaa masuuliyaddaa qaadaya oo dadka deegaanku kula xisaabtamayaa. Waxaan dadka u sheegayaa in loo baahan yahay in degdeg halkaasi dadkii lahaa loogu banneeyo si ay degaan. Dadkaa waa loo xoog sheegtay oo waa la khiyaameeyey. Waa la iska hor keenay oo iyaga ayaa cadaw la isaga dhigay. Ninkaasi waa ninka laga soo eryay meesha la yidhaa dhufta ee caanaha la dhigo ee sheekh Bashiir agtiisa oo ah nin meel walba oo magaalada ka mid ah xidhay. Waxaanu rabnaa in dhulkan beenta ah ee uu xidhay la banneeyo. U dul qaadan mayno”.
Boqor Raabi Yuusuf Cabdilaahi oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi: “Maxkamaddii Hargeysa, halkii uu fadhiisan jiray qaadiga magaaladu ee ku xigay meesha istayshin bilayska. Waa dhulka la boobayo ayay ka mid tahay ee Martida timid magaaladu ay boobayso. Waa dhulkii Jirde Aw Cali meeshaasi iyo istayshin bilayskuba. Haddii cidi qaadanayso waxa qaadanaya Jirde Aw Cali. Dadka deegaankani waxa ay lahaayeen in ka badan 9500 oo Guri baa ku yaallay oo la wada maydhaamay imika oo la wada qaatay. Waxaan leeyahay nin kasta oo lacag ku bixiyayow kuu cuntami mayso. Deegaankuna wuu doonayaa dhulkiisii. Goor kastaba ha gaadhee waa lagaa qaadayaa ee ogow. Lacagtaadana adiga ayaa iska bixiyay. Dhulkii deegaanku lahaa sakona kaaga bixi mayso salaadina kuugu gudi mayso. Kuna noolaan maysid oo waad dhimanaysaa. Waxaan idin leeyahay inta aanay idinku ololin isaga baxa. Dugsigii Seekh Bashiir isaga oo loogu gabbanayo Masaajidada Ilaahay. Ninka Masaajiska yar ka dhisay waa ka dhulkii dayrnaa ee iskuulku lahaa waa ka qaatay ee dhisanaya ee imika dhiskiisu socdo. Kaasina wuu noo liistaysan yahay. Dhammaan hantidii deegaanku lahaa cid dambe oo ku takri fashaa ma jirto. Haddii aanay jirin caddaalad loogu qaybinayaa iyaga ayaa xaq u leh oo qaadanaya waxooda. Magaaladu caasimad bay noqotay oo waanu ku soo dhawaynaynaa dadka ”.ayuu yidhi Boqor Raabi Yuusuf Cabdilaahi.
Madaxweynaha La Doortay Ee Mareykanka Joe Biden Muxuu Ka Yidhi Soomaalida??
(SLT-Washington)-Musharaxii xisbiga Dimoqoraadiga Joe Biden ayaa ku guulleystay doorashada dalka Mareykanka, wuxuuna ku garaacay madaxweynaha hadda...
Muslimiinta Iyo Afrika Oo Laga Qaadayo Xanibaadihii Socdaalka Maraykanka
By Wariye November 8, 2020
Xayiraadihii uu madaxweyne Donald Trump kusoo rogay wadamada muslimiinta ee galitaanka Maraykanka ayaa la laalayaa dhammaantood,...